Martial Law & Human shield |
စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေ အသက်ဝင်လာပါက လူငယ်များ စစ်မှု ထမ်းသင့်/ မထမ်းသင့်နှင့် စကစ၏အကြံဆိုး ”
နိုင်ငံသားတိုင်း စစ်မှုထမ်းဖို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ အာ ဏာရူး မင်းအောင်လှိုင်က (ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်) က ပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ပြောပါတယ်။၎င်းအနေနဲ့ ယခုနှစ်အတွင်း ရည်မှန်းချက် ၃ ခုရှိပြီး တစ်အချက်အနေနဲ့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို ရအောင် ဆွဲတင်မှာဖြစ်ကာ နှစ်အချက်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံ ရေးနဲ့ စီးပွားရေး အားကောင်းလာပါက နိုင်ငံ တော် ကာကွယ်ရေးအတွက်ကို အားလုံးပါဝင်တဲ့ ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
မအလ၏ ပြောကြားချက်အရ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို ချက်ချင်းအသက်သွင်းမှာ မဟုတ်သေး ပါဘူး။မအလနဲ့ဘောမတစ်သိုက်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရောက်ခါနီးမှ အသက်သွင်းမှာ ပါ။ သူပြောတဲ့အချက်ထဲကနံပါတ် ၁ဖြစ်တဲ့ တိုင်း ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကိုရအောင်ဆွဲတင်မှာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်က လုံးဝဖြစ်မလာနိုင်ဘူး ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံ့စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ တရုတ်ကလွဲပြီး ဘယ်နိုင်ငံမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရဲပါဘူး။လက်ရှိလုပ်ငန်း တွေတောင် ရပ်ဆိုင်းပြီး ထွက်ခွာနေကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ရပ်ကွက်မှာတော့ နိုင်ငံက တိုးတက် နေတာပဲ။မအလရဲ့ ရုပ်သေးယာယီသမ္မတ ဦးမြင့် ဆွေကတောင် စကစကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်လာ တယ်လို့ ပြောနေတာကိုကြည့်ရင် စီးပွားရေး တိုး တက်ခြင်း၊ မတိုးတက်ခြင်းက သူတို့ပါးစပ်ထဲမှာ ပဲရှိပါတယ်။
စီးပွားရေးတိုးတက်တာ မတိုးတက်တာ ခဏထားလိုက်ပါ။ အဓိကပြောချင်တာက စစ်မှုထမ်းသင့် မထမ်းသင့် ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ မအလ စပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ မအလရဲ့ စစ်ထဲတော့မဝင်ဘူး pdf ထဲကိုပဲသွား မယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ရယ်။ စစ်ထဲကိုဝင်ပြီး မအလကို ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အ ဖွဲ့ရယ် ပြည်သူ(လူငယ်)တွေကြားထဲ နှစ်ဖွဲ့ စကွဲပါပြီ။
ကျွန်တော်ကတော့ စစ်သား cdm တစ်ယောက်ပီ ပီ ပထမအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မအလရဲ့စစ် ထဲတော့မဝင်ဘူး pdf ထဲဝင်မှာကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မအလ တပ်က ဘယ်လိုလည်ပတ်နေတာလဲဆိုတာရယ် ၊ အရာရှိ၊ စစ်သည်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထား တယ်ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လို ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေ နဲ့ သူတို့ အာဏာတည်မြဲအောင်လုပ်ဆောင်နေကြ လဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး သိလို့ပါ။
ဒုတိယအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ စစ်ထဲကိုဝင်ပြီး မအလကိုပြန် တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ လုံးဝအားမပေးပါ။ စိတ်ကူးယဉ် နေကြချင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မအလ က စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို အသက်သွင်းမ ယ်လို့ပြောတာဟာ နောက်ကွယ်မှာ အကြံအစည် ပေါင်း များစွာရှိပါတယ်။ မအလကို အရမ်းကြီး လျော့မတွက်ကြပါနဲ့။ အခုလိုပြောလိုက်တာနဲ့ ပင် ပြည်သူတွေကြားထဲ မီးစမွှေးပေးတာပါပဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေကို ကြည့်ပြီး အနှေးနဲ့ အမြန်အကောင်အထည်ဖော်လာမှာပါ။
တစ်ချို့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်တော် ဆိုရှ ယ်မီဒီယာတွေမှာ မရေးချင်၊ မပြောချင်ပါဘူး ။ ကိုယ်ပြောလိုက် ရေးလိုက်တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ က သူတို့အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့ နည်းပေး လမ်းပြဖြစ်သွားပြီး ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်သွား မှာ အရမ်းစိုးရိမ်လို့ပါ။ မအလရဲ့တစ်ချို့လုပ်ရပ် တွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန် ချက်တွေကို ကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်နေကြတာကို သိ ကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုအကြောင်းအရာကိုတော့ ပြည်သူ တွေ သိထားသင့်သလို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့် တယ်လို့ ယူဆပြီး တင်ပြပေးပါမယ်။ ကျွန်တော် တင်ပြချက်တွေက မှားနေတယ်ဆိုရင် ခွင့်လွတ် ပေးကြပါ။ ကျွန်တော့အသိဉာဏ်က အဲ့သလော က်ပဲ ရှိလို့ပါ။
ဒါဆိုရင် စကစ က စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို စတင်အသက်သွင်းလာပြီဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာ နိုင်မလဲ?
ဥပဒေကို စတင်အသက်သွင်းပြီဆိုတာနဲ့ တစ် နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့( EROs နဲ့ PDF များ အားကောင်းပြီး ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှအပ) အသက် ၁၈ ကနေ ၃၅နှစ်အတွင်းရှိတဲ့ လူငယ် လူရွယ်တွေစာရင်းကို စတင်ကောက်ခံပါလိမ့် မည်။ ထိုသို့ ကောက်ခံပြီဆိုရင် ဘယ်အိမ်က ဘယ်သူ့ သားသမီးက မရှိဘူး၊ ဘယ်သွားနေတယ်၊ ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို အရင်ဆုံး သိသွားပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် ကိုယ့်သားသမီးကို ဘယ်နေ့အရောက်ပြန်ခေါ် ၊ဘယ်နေ့အရောက် ဘယ်ကို သတင်းပို့ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြန်မခေါ် နိုင်ရင် စစ်မှုထမ်းရန် ရှောင်လွှဲမှု ဆိုတာနဲ့စပြီး မိသားစုတွေကို မတရားဖမ်းဆီး အရေးယူခံ ရနိုင်ပါတယ်။(ရှောင်လွှဲနိုင်သူများရင် ထိုကိစ္စ က မဖြစ်နိုင်တော့ပါ) မရှောင်လွှဲ နိုင်သူများနှင့် ဒုတိယအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ စစ်ထဲဝင်ပြီး မအလဘက် ပြောင်းလှည့်မည့် သူများသည် နီးစပ်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ သို့သွားရောက်၍သတင်းပို့ရပါမည်။သတင်း ပို့ပြီးသည်နှင့် သူတို့ သတ်မှတ်ထားသည့် နေ ရာ(အဆောင်)များတွင် လုံခြုံရေးထူထပ်စွာ ဖြင့် စတင် အကျယ်ချုပ် ကျပြီဖြစ်သည်။
( ဖုန်းကိုင်ခွင့် လုံးဝရရှိမှာ မဟုတ်ဘဲ အမိန့် ဆိုသည့် စကားလုံးများနှင့် စတင်ဖိနှိပ်ပါလိမ့်မည်။ တန်းခဏခဏ စီခြင်း၊ ဖက်ထိပ်လုပ် ခိုင်းခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်းပေါင်းစုံကို ထောင်သားများသဖွယ် လက်နက်ကိုင် အ စောင့်များဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြရတော့မည်။)
အကျယ်ချုပ် ကျနေစဥ်အတွင်း မဝရေစာ ကျွေးကာ စစ်သားဘဝဆိုတာ ဒါပဲကွ ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးလေသံတွေနဲ့ ပြောစကားတွေကို မခံချိမခံကာ နားထောင်ရုံက လွဲလို့ ဘာမှတတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ ဆေးစစ်ခြင်း( မအောင် မရှိ) လုပ်ကာ အကုန်လုံးကို စစ်သင်တန်းကျောင်း တွေကို ပို့ဆောင်ကြမှာပါ။ ခြံစည်းရိုးအထပ်ထပ်နှင့် လူသူအရောက် အပေါက်နည်းသော သင်တန်းကျောင်းများ သို့စတင်ရောက်ရှိသည်နှင့် ပြောင်းလှည့်မည့်သူ များအား အခြေခံစစ်ပညာ (ဖက်ထိပ်) သင်တန်းကို ၆လ သတ်မှတ်ပြီး တရားဝင်ဖမ်းဆီး ထိန်းချုပ်ထားတော့မည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကျောင်းများကို မြို့ကြီးများ တွင် ဖွင့်လှစ်မှာ မဟုတ်ဘဲ တော၊ တောင်များနှင့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်လာနိုင်သည့် နေရာများတွင် သာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး သင်တန်းကျောင်း ပတ် လည်တွင် လုံခြုံရေးအကြောင်းပြကာ မိုင်း ကွင်းများ ပြုလုပ်ထားကြလိမ့်မည်။
သင်တန်းကျောင်းများတွင် ပတ်ကား လက် နက်ငယ်များ ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှိဘဲ DB လို့ခေါ်တဲ့ လက်နက်အစုတ်များသာ ထုတ် ပေးထား၍ ပြောင်းလှည့်မည့်သူများ မောင်း တင်လို့ပင် ရမည်မဟုတ်ပေ။ သင်တန်းဆင်း ခါနီး ပစ်ခတ်စဥ်ဝင်မှသာ လက်နက်ငယ် အ ကောင်း အလက် ၂၀ ထက် ပိုမထုတ်ပေးချေ ဒါတောင် ကျည်မပါ ပါ။ကျည်ပါလည်း လေ့ ကျင့်ရေးကျည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလများနှင့် နိုင်ငံအေးချမ်းနေသည့်ကာလများမှာပင် သင်တန်းကျောင်းများသည် အထက်ပါအတိုင်းဖြစ်၍ ယခုကာလဆိုရင် ဒိထက်ပင်ပို၍ တင်းကျပ်နိုင် သည်။ လိုအပ်လျှင်စစ်တပ်၏ လက်သုံး စ ကားဖြစ်သည့် လိုအပ်ချက်အရ ဟုဆိုကာ သင်တန်း ကာလများကို တိုးမြှင့်သွားလိမ့်မည်။ သင်တန်းကာလအတွင်း သူတို့ကို ပြောင်းလှည့်မယ်လို့ ကြိမ်းဝါးထားတဲ့ လူငယ်လူရွယ်အများအပြားကို လှုပ်မရအောင် ထိန်းချုပ် ထားနိုင်မှာဖြစ်သည့်အပြင် EROs နဲ့ PDF များက သူတို့ကို တိုက်ခိုက်လာလျှင် ပြောင်း လှည့်မည့်သူများကိုလူသားဒိုင်းအဖြစ်အသုံး ချပြီး တော်လှန်ချင်သူအချင်းချင်း ငါးကြင်း ဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်နိုင်ဖို့ ကြံစည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ စစ်တပ်ထဲဝင် သင်တန်းတက်၊ ပြီးရင် လက် နက်နှင့် ကျည်ဆံကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိမ့်မည်ဟု တွေးထင်ထားရင် အမှားကြီး မှားလိမ့်မည်။ ယနေ့စစ်တပ်ထဲတွင် ခြေလျင်ခြေမြန် တိုက်ခိုက်ရေးတပ်များမှလွဲ၍ အထိုင် လက်ရုံးတပ်များရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည်များပင်လျင် သင်တန်းတက်ချိန် မှအပ ကျန်စစ်သက်တစ်လျှောက် လက်နက်ငယ် နှင့် ကျည်ဆံကို မတွေ့ဖူး ၊ မကိုင်ဖူးကြတော့ပေ။လုံခြုံရေးသွားရရင်တောင် လက်နက်ပါပေမယ့် ကျည်မပါပေ။
အခုအရေးပေါ်ကာလရောက်မှသာ လက်နက်နှင့် ကျည်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သော်လည်း အကုန်လုံး ကို ထုတ်မပေးချေ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသူကိုသာ ထုတ်ပေးပါသည်။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်ထဲဝင်၍ ပြောင်းလှည့်မယ် ဟု စဥ်းစားထားသူများ ဝင်သင့်၊ မဝင်သင့် စဥ်းစား ကြ​စေလိုပါသည်။
စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေသည် ယခုအချိန်တွင် အသက်မဝင်သေးပေ။ အထက်ပါတင်ပြချက်များသည် မိုးမပြို ပြိုခဲ့သည် ရှိသော ပြည်သူများအနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား နိုင်ရန် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စကစအနေဖြင့်လည်း ထိုဥပဒေကို အသက်သွင်း ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့လည်း မရှိဘူး လို့ ထင်မြင်ယူဆပါသည်(မိမိတစ်ဦးတည်းအမြင် သာဖြစ်ပါသည်။) ထိုဥပဒေကို အသက်သွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်.၎င်းတို့အနေဖြင့်လည်းများစွာကြို တင်ပြင်ဆင်ရဦးမှာဖြစ်ပါသည်။ ထိုဥပဒေကို အ သက်သွင်းဖို့ ဘဏ္ဍာငွေများစွာလိုအပ်ပါလိမ့်မည် ဒါကြောင့်လည်း စီးပွားရေးတိုးတက်လာလျှင် ဥ ပဒေကို အသက်သွင်းမည်ဟု မအလ က ကြိုကန် ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဆို ဘာလို့ စစ်မှုထမ်းသင့် မထမ်းသင့်လို့ ရေး ရသလဲဆိုရင် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ အာဏာရူး မအလ ပြောသမျှကို နားထောင်ပြီး အရေးတယူလိုက်ရေး လိုက်ပြောနေတာတွေကို မလုပ်စေချင်လို့ပါ။ သူတို့ပြောသမျှ လုပ်သမျှ တွေဟာ သူတို့ကောင်းစားရေးနဲ့ အာဏာတည်မြဲ ရေးအတွက်ပါ။ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွ က် ဘာတစ်ခုမှ မပါပါဘူး။ သူတို့ ဘာပြောပြော ဘာအမိန့်ထုတ်ထုတ်၊ ဘာပွဲပဲ လုပ်လုပ် လျစ်လျူ ရှုထားကြပါ။
အခု မအလက သူတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအပါအ ဝင် ပြည်သူလူထုကို တစ်ခုခုပြောချင် ပြီဆိုရင် ဗရုတ်သုတ်ခ စကားလုံးတွေ ထည့်ပြီးပြောလိုက်တာနဲ့ ပြည်သူလူထုကလှောင်ပြောင်ချင်၍ဖြစ်စေ ၊ မခံချင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ မှာ မျှဝေရေးသားကြတဲ့အတွက် သတင်းစကား တွေက ချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပြီး ကိုယ်တွေက pro motion လုပ်ပေးနေသလိုဖြစ်နေကြတယ်။
ဒါကြောင့် သူတိုပြောချင်တာတွေကို သတင်းမီဒီ ယာကြီးတွေကနေတဆင့် ပြောလာရင်တောင် သိ ချင်ရင် ဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက်။ သိပြီးသွားရင် ဘာမှတ်ချက်မှ မရေးနဲ့ share မလုပ်နဲ့။ သတင်းမီဒီ ယာတွေက ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ထပ်ရေးနေဦးမှာပဲ။ ပြည်သူတွေက စိတ်မဝင်စား ဘဲ လျစ်လျူရှုလိုက်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မရေး ကြတော့ဘူး။ အဲ့သလိုဆိုရင် ပြည်သူတွေကို သူ တို့ပြောချင် လုပ်ချင်တာတွေ ပြည်သူကြားထဲ မ ရောက်တော့ဘူး။ သူတို့ဘာသာ ပြောချင်ရာပြော လုပ်ချင်ရာလုပ် ဂရုစိုက်မယ့်သူမရှိရင် အရူးဖြစ် သွားလိမ့်မယ်။
အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေ ဂရုစိုက်ရမှာက တော် လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ PDF ၊ EROsနဲ့ UG တွေအတွက် တန်ဖိုးရှိမယ့် သ တင်းတွေ ပေးနိုင်ဖို့ ၊ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို လိုက် နာဖို့၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပေးကြပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မြန်မာ့ မြေပေါ်ကနေ အမြစ်ပြတ်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကိုသာ အလေးထားလုပ်ဆောင်ကြရန်နှင့် တန်းတူညီမျှတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကို တည် ထောင်နိုင်ရေး ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းကြပါစို့။
Presentation copy from ရဲဘော်ဂျက်
« No Space for Narrow Minded in Burma’s Revolution Process Military Coup in Burma: One year on, what next? »